Madaxweynaha JFS oo la hadlay Ciidanka Xoogga Dalka ee ku sugan Kismaayo – WARSOOR
Kismaanyo – (warsoor) – Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland ee Soomaaliya Mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa maanta oo Talaado ah Magaalada Kismaayo kusoo dhaweeyay Madaxweynaha Dowlada Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullahi Maxamed iyo wafdi balaadhan oo uu Hogaaminayo.
Madaxweyne Axmed Maxamed Islaam ayaa soo dhawayn kadib sheegay in Jubbaland ay muhiim u tahay booqashada maanta oo uu sheegay in Madaxweyne Farmaajo uu ku yimid qayb dalkiisa kamid ah oo uu ka hanaqaaday uun hananka Federaalka ah balse aysan jirin cid kamadax banan uu uu halkan ugu yimid.
Mudane Axmed Maxamed Islaam waxaa uu xusay in ay Jubbaland rajaynayso sidii loo hirgalin lahaa Xarumo iyo goobo ay ku shaqeeyaan Hay’adaha Dowlada Dhexe gaar ahaan Madaxtooyada Ra”iisul Wasaaraha iyo Gudoomiyaha Baarlamaanka.
Madaxweyne Farmaajo ayaa ka mahad celiyay sida diiran ee loogu soo dhaweeyay Jubbaland isagoo ku amaanay hawsha wanaagsan ee Jubbaland ay ka qabatay Magaalada Kismaayo oo hada Xarun KMG ah isla markana ay ku shaqeeyaan Hay’adaha kala duwan ee Dowlada Jubbaland isagoo balan qaaday in Federaalku ay sida ugu dhaqsiyaha badan uga hawlgali doonan sidii Xarumo ay Madaxda Dowlada dhexe ku shaqeeyaan Kismaayo looga furi lahaa.
Intaas kadib labada Madaxweyne waxay booqdeen Xarunta Jaamacada Kismaayo oo ay ku xaraysan yihiin Ciidamada Federaalka isku dhafka ah waxaana ay salaam ka qaateen cutubyo kala duwan oo katirsan SNA.
Madaxweynaha Jubbaland ayaa sheegay in Ciidamadan ay dhamaysteen dhamaan tababarkii ay u baahnayeen hadana ay u xayiran yihiin hub la’aan taas oo dhaliisheeda ay leedahay Dowlada Federaalka ah isagoo ugu danbayn sheegay in Dowlada Federaalka ah laga sugayo in Ciidamadan ay meel saarto tasiiladka ay u baahan yihiin si ay u hawlagalaan .
Madaxweyne Farmaajo ayaa dhankiisa sheegay in Dowlada Federaalka ah ay sida ugu dhaw u keeni doonto dhamaan agabka Ciidamadan ka maqan isla markana ay hawlgali doonan.
Madaxweynaha Federaalka Mudane Maxamed Cabdullahi Farmaajo waxaa kale oo Madaxweynaha Jubbaland uu ku amaanay sida uu uga shaqeeyay Nabada iyo Dagananshaha ka jira Jubbaland gaar ahaan Kismaayo isagoo xusay in Madaxda iyo Masuuliyiintu iyaga oo aan ilaalo wadan ay xiligay doonan Magaalada dhex socdaan taasna ay tahay wax lagu faano oo hadii Dowlada Federaalka ah ay yihiina ay kaga dayan doonan.
Labada Madaxweyne waxaa kale oo ay isla maanta booqdeen Xarunta tababarka Ciidamada Darawiishta Jubbaland halkaas oo Ciidamo tababar dhamaystay ay kula hadleen.
Booqashada Madaxweynaha Dowlada Federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo ayaa qaadan doonta mudo kooban oo aan la shaacin isagoo kulamo la qaadan doona Madaxda Dowlada Jubbaland iyo bulshada waxaana kadib uu ku laaban doona Magaalada Muqdisho.
Burco: Guddoomiyaha KULMIYE oo Taakulo Lacageed oo Dhan $70,000 ku Wareejiyey Wasaaradda Caafimaadka